May 15 - Usuku lomndeni. umlando iholide
Umkhaya - iyunithi ebaluleke kakhulu emphakathini. Ngaphandle-ke, akunakwenzeka ukuthi akhona futhi isimo. Ngakho-ke, kulawo mazwe ukuthi ukhathazekile mayelana nentuthuko yabo, hhayi ukuyibalekela May 15 - Day Family. Phela, ukuthi impucuko athuthukile, okokuqala kunakho konke, kufanele kube umkhaya oqinile.
Izimpande umlando Usuku Umkhaya mhlaka-15 Meyi, uya kufike emuva njengoba 1989, lapho umzamo wokuqala ukwakha isiko. Nokho, lo mzamo uye wasekela umphakathi wonke futhi sina ngezinkinga zomkhaya kuphela emva kweminyaka 5. Futhi 1994 umenyezelwe International Year of the Family.
Ngesikhathi esifanayo, ukubhekana UN LoMhlangano wajoyina izinkinga. Inhlangano lathatha isinqumo sendlela unokusha usuku incwadi ebomvu emhlabeni - Meyi 15 (Usuku Family), ukuze babonwe ngonyaka. Ubethula ekubaleni yokuthi ngalolusuku njalo ngonyaka emhlabeni wonke kuzothatha ezihlukahlukene izingqungquthela, izinkundla, imikhosi, ezinikele izinkinga zangempela omkhaya.
2014 - unyaka wejubili, ngoba Day Family izakhamuzi zezwe ziye zaphawula usuvele 20 isikhathi th. Nokho, e-Russia, silondoloze leli siko waqala ngemva konyaka - ngo-1995 Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, isimo zethu zaqala ukugcwala ngonanzelelo izinkinga zemindeni kuleli zwe. A 2008 isimemezelo umlawuli Russian oyinhloko ezamenyezelwa Yonyaka Family.
Umbono ngalokwenetisako zezwe futhi lithenga izimiso ezifanele zokuziphatha, uhlamvu ngezici ezithile - it is konke umuntu sibekwa umbuthano ewumngcingo labangani asondelene nabo. Indoda kuphela umndeni ungathola imfudumalo, uthando. Phakathi yonke inqubo komphakathi wemfanelo ngabanye abazali kwasekuqaleni.
umkhaya oqinile kuyisihluthulelo inhlalakahle sabantu abakule planethi. Ngakho-ke, umbuso kufanele uthathe ukunakekelwa okukhulu kwaleli qembu umphakathi. Kwangathi 15 - Day Family - amakholi emhlabeni ukubonakalisa izimo lapho uhlala imikhaya namuhla kufundiswe kahle izingane indlela yokunqoba nezinkinga zokuphila ihlangabezane endleleni.
Ngezinye izikhathi udinga isizathu ukukhumbula abazali bakhe 'ekhaya, izingane, izindinganiso zemikhaya futhi okhokho babo. Ngenxa yalezi zinjongo, kanye kwabelwe usuku oluthile. Qinisekisa ukudluliselwa amasiko ezizukulwaneni ngezizukulwane - lokho omunye wemisebenzi eyinhloko iseli emphakathini. ukubaluleka kwalo ayikwazi understated emphakathini. It kumelwe kuhlakulelwe ngesisekelo umndeni okuphelele.
Kungani lo iholide ekhethekile?
Umhlaba Usuku Imindeni ku 15 May, Aya ngokuya ethandwa kakhulu njalo ngonyaka. Labo kuye kwaba nemibuzo ephakanyiswayo ngosuku lomkhosi, bese unyaka wonke isixazululekile e isiqongo isimo. Leli phuzu elibalulekile inike Day Umkhaya nezinye izenzakalo eziningi, okuyinto bekhunjulwa kuphela ngosuku lomcimbi.
Usuku Family - lena iholide kubaluleke kakhulu futhi zithandwa kakhulu. Noma yimuphi umsebenzi onjalo kuba nomphumela omuhle isimo namalungu awo fikisa them closer. A mkhosi abazinikezele kakhulu kule yunithi emphakathini, kulapho-ke kuyoba nesandla kwemicabango. Kuphephile ukusho ukuthi umqondo yokudala sehlo nokuqalisa ngempumelelo. Nakuba leli holidi isencane, sesivele has namasiko alo.
Amasiko Day Family eRussia
Minyaka yonke Meyi 15 - Umndeni Day - kugujwa ngokubamba emkhosini ku Kremlin. Unikelwa umklomelo "Umndeni Russia". Imikhaya emikhulu "Inkazimulo sabazali" akuvezwe Order. Isinqumo elihambisana ekuvunyweni umklomelo esayinwe Unyaka we Family futhi, ngokufanelekile, ekhishwe ngo-May 2008.
Futhi ngalolu suku lonke imikhosi ehlukahlukene, mpikiswano, izingqungquthela ku sikhungo umndeni. Futhi phakathi naso sonke isikhathi (iminyaka eminingi) labetibambile ukubaluleka inkulumo-ze umndeni nokuzala, okuyinto kancane kancane nithela izithelo. Ezindaweni eziningi Russian ezinophawu ukwanda e wenzalo eminyakeni embalwa edlule futhi ngokweqile yokufa.
Kunenye isiko emangalisayo elihlobene ne Usuku umndeni - lonke lelo zwe ukugubha omunye umcimbi. Zonke efanayo ngo-2008 uzwakalise celebration lonke zamukelwa kabanzi ezinkolweni - UPetru No Fevronia Day, ephawula lonke lelo zwe ngo-July 7. Lolu suku nabo babeba imisebenzi eminingi okuhloswe ngaso nokugcina kweSikole umndeni.
Ukusekela imindeni eRussia
Usuku Umkhaya Celebration-May 15, njengoba umthetho, emazweni ophucukile kuthatha impela kakhulu, nezindaba ezihlobene nabo, abaluleke sokuthuthukiswa amazwe. ERussia ke lugujwa iminyaka engu-19. Njalo ngonyaka kuba evuthayo ukhiye indaba ephathwayo, ahlangana wonke izifundo aphethwe ngesikhathi izenzakalo.
2008 kwathiwa Ka Umkhaya eRussia, okuyiwona Uhulumeni ususungule uhlelo isimo onohlonze ezihlose ukwakha ekugcinweni kokuthula imikhaya ezweni lethu. Endaweni yokuqala kuhulumeni uyabasekela labo imikhaya abangekho esimweni esinzima. Ngakho, indawo ebalulekile hlelo wukuhlinzeka usizo impesheni abangabodwa nezingane abangenalo abalondolozi.
Ungakhohlwa ababusi bezwe izinkinga umama kanye ebuntwaneni. Ngokwesibonelo, le nkinga sibi yokufa lapho bebeletha, kokubili zomama nezingane zabo. Ukuze lezi zibalo bathambekele zero, udinga ukuqinisekisa ikhwalithi ukunakekelwa kwezempilo leli nani labantu ngezithukuthuku isimo, okuyinto inhloso izinhlelo ekhona.
Futhi, ngempumelelo lizwe sisukelé inqubomgomo okwandisa izinga lokuzalwa futhi ukusekela imindeni emikhulu. Ngokwesibonelo, ngempumelelo ukusebenza uhlelo "womama inhlokodolobha", okusho ukuba ingane yesibili kunikezwa isitifiketi target, futhi le isamba ngokobungako unyaka ngamunye ukuze iphesenti izinga lokwehla kwamandla emali (uma isitifiketi ongakabi sasebenzisa). Noma ezinye - ukunikeza umhlaba ukuze kwakhiwe izindlu ngesikhathi sokuzalwa sengane lwesithathu.
Ukusekela imindeni enezingane eziningi eYurophu
Inkinga eyinhloko emazweni ase-European, kuxoxwa ngazo uSuku International of Imindeni ku 15 Meyi kuyinkinga okuzala. Kuyinto acute ngaphezulu iminotho ithuthukiswe. kanjani uthi European ukubhekana nalezi zinkinga? Kakhulukazi ngenxa uxhaso.
Ngokwesibonelo, eFrance, lapho izinga lokuzalwa ezingeni eliphezulu kakhulu phakathi umphakathi European, uhlelo olubizwa ngokuthi "Big Family". Ngenxa wakhe, ngemva kokuzalwa komntwana ngamunye okwalandela umndeni uthola ekhulula intela. Ngakho, nezingane ezine izintela umndeni esimweni ngokulambisa ukhokha.
EJalimane, futhi izingane eziningi Umama uthola ibhonasi kusukela intela ngengane ngayinye ozalwa. Futhi plus ngengane ngayinye ithola inkokhelo yenyanga 154 euro. ESweden bathole lezi zinzuzo laba kwanda obhekwe elinye ilungu lomndeni. Ngaphezu kwalokho, uma umndeni yaziwa njengenye abampofu, uhulumeni uyala uxhaso olwengeziwe.
Kungani ukopha kwezinsini lapho uxubha amazinyo: izimbangela kanye nokwelashwa
Kusho ukuthini ephusheni ukuba batshale izimbali?